- လက်ရှိ လူကုန်ကူးနေတဲ့နေရာတွေနဲ့ လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ သားကောင်ရရှိဖို့ ဖောဖောသီသီ အသုံးချနေတဲ့ စိတ်လက်နက်။
- သိစရာအာရုံနဲ့ အာရုံကို သိမှတ်နေတဲ့ အသိနှစ်ခုဟာ အညီအမျှ အချိုးကျကျဖြစ်အောင် အားထုတ်တဲ့အချိန်မှာ အသုံးပြုနေရတဲ့ စိတ်အသိ။
- မိမိဘက်က စွမ်းအားအရင်းအနှီး ဘာမှမစိုက်ဘဲ သူတစ်ပါး ပင်ပင်ပန်းပန်း ရုန်းကန် ရှာဖွေထားတာတွေကို အချောင်လိုချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ အချောင်နှိုက်လို့ရတဲ့ နည်းတွေသုံးပြီး ယူတယ်။ အချောင်လိုက်လို့ရသမျှ အချောင်ခိုတယ်။ ဒါဟာ အချောင်သမားစိတ်ပဲ။
- အစွဲအလမ်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ တဏှာစိတ်နဲ့ အချိတ်အဆက်ရှိတယ်။ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ တဏှာစိတ်က ခံစားစိတ်ကနေ ထပ်ဆင့်ပွားလာတဲ့စိတ်။
ဝေဒနာပစ္စယာတဏှာ - ခံစားမှုစိတ်ဟာ အာရုံနဲ့စိတ်နဲ့ စိတ်ချင်းထိတွေ့မှုကနေ ထပ်ဆင့် ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်။
ဖဿပစ္စယာဝေဒနာ - အထိအတွေ့စိတ်ဟာ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် ပစ္စည်းခြောက်ခုကြောင့် ဖြစ်တဲ့စိတ်။
အာယတနပစ္စယာဝေဒနာ - ပစ္စည်းခြောက်ခုဖြစ်လာတာဟာ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးကြောင့် ဖြစ်တာ။ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်တွေ မရှိစေချင်ရင် တဏှာဆိုတဲ့ ဘ၀အသစ် တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်စေတဲ့ ဆာလောင်စိတ် အချိတ်အဆက်တွေ ဖြတ်ပစ်ရမယ်။
- လာမယ့်ဥပုသ်နေ့က မွေးနေ့မွေးရက်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ စလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ! ဟ! နေဦး အဲဒီနေ့မှာ ငါ့မိန်းမ ဂျပန်ကနေ ပြန်လာမယ့်နေ့ပဲ။ မိန်းမပြန်လာတုန်းလေး ငါက ငါ့မိန်းမနားမှာပဲ ရှိသင့်တာပေါ့။ သူ့ခမျာ တစ်ပတ်တည်း လာခွင့်ရတာ။ ကဲကဲ! နောက်မှပဲ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တော့မယ်။ အဲဒီလို အချိန်တွေရွှေ့ရွှေ့နေတဲ့လူကြီး သူ့မိန်းမ မပြန်ခင် စကားတွေများ၊ ရန်တွေဖြစ်၊ သွေးတွေတိုး၊ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး အသက်ပါ ပါသွားတယ်ဆိုရင် ဘယ်စိတ်အသိကိုများ ယူသွားနိုင်ပါလိမ့်။
- လေးလေးပင်ပင်၊ ပြည့်ပြည့်၀၀၊ ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်၊ အနှစ်မပါ၊ အဆံချောင်၊ ဈေးပေါပေါ၊ သိက္ခာမရှိ၊ အကျင့်စာရိတ္တမကောင်း၊ စရိုက်ပျက်စီး စတဲ့ တန်ဖိုးမရှိတဲ့ အဓိပ္ပာယ်များနဲ့ စိတ်အနေအထား။
- ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို ရုတ်တရက် ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ တစ်သက်လုံး မှားယွင်းစွာ လက်ခံထားတဲ့ အမှတ်မှားတွေ၊ အသိမှားတွေ၊ အစွဲတွေ အကုန်လုံး ဖြတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ အသိသစ်နဲ့ ဖြတ်နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး အချိန်မီ ပြုပြင်နေတဲ့စိတ်။ (ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏဆိုတဲ့ သတိပေးမှုကို ပြင်စေချင်တဲ့သူတွေ၊ ပြင်သင့်တဲ့သူတွေ၊ ပြင်ချိန် ရောက်ပြီဆိုတဲ့သူတွေ၊ အချိန်မီ သိဖို့တော့ လိုတယ်။)
- အာရုံခြောက်ပါးနဲ့ ခြယ်လှယ်တတ်တဲ့ စေတသိက်တွေကြောင့် နေရာတိုင်းမှာ ရန်သူပေါင်းစုံရဲ့ အန္တရာယ်တွေကို တွေ့နိုင်တယ်။ လူတွေကြားထဲမှာ အချိန်ပြည့် သတိထားတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို အကျင့်ပါသွားတဲ့အထိ လေ့ကျင့်သင့်ပြီ။
- အကွပ်မရှိတဲ့ကြမ်း ပရမ်းပတာတဲ့။ အချုပ်အနှောင်မရှိတဲ့စိတ် အဆိပ်တဲ့။ (ထိန်းချုပ်မှုမရှိတာနဲ့ လွင့်ချင်ရာ လွင့်တတ်တဲ့ စိတ်သဘာဝကို သတိယှဉ်တဲ့ အသိဉာဏ်နဲ့ ထိန်းချုပ်ပြီး စိတ်ကို လိုရာသာခိုင်းပါ။ စိတ်က အသိဉာဏ်ခိုင်းရင် လုပ်တတ်ပါတယ်။)